क्यान्सर | Ratopati
तीन टोल क्यान्सरपीडित बनेपछि पानी परीक्षण शुरु access_timeफागुन १८, २०७६
सर्लाही । हरिवन नगरपालिका–५ घुर्कौलीको सिद्धार्थ टोल, धनपति टोल र गोले टोलका २६ जनाले अढाइ वर्षको अन्तरालमा क्यान्सरका कारण ज्यान गुमाएका छन् । तीनै टोलमा क्यान्सर रोग प्रकोपका रूपमा फैलिएको छ । जसका कारण हाल पनि उक्त टोलमा आठ जना क्यान्सरका बिरामी उपचाररत...
कतार एयरवेज अन्तर्राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण संघको आधिकारिक एयरलाइन access_timeमाघ २२, २०७६
दोहा– कतार एयरवेज क्यान्सर रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयासमा सहभागी हुने उद्देश्यले युनियन फर इन्टरनेशनल क्यान्सर कन्ट्रोल (अन्तर्राष्ट्रिय क्यान्सर नियन्त्रण संघ)को आधिकारिक एयरलाइन प्रायोजक बनेको छ । विश्व क्यान्सर दिवसको २०औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा उक्त जानकारी दिइए...
दिसामा रगत आयो ? कोलोरेक्टल क्यान्सर हुन सक्छ access_timeमाघ २१, २०७६
नेपालमा क्यान्सर रोगीको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ । क्यान्सर रोग लागेपछि मरिहालिन्छ भन्ने त्रास भए पनि समयमै पहिचान भएको खण्डमा यो पूर्ण रूपमा निको हुने रोग हो । तर क्यान्सरले ठूलो रूप लिइसकेको अवस्था छ भने पनि उपचारबाट बिरामीलाई बचाउन भने सकिन्छ । कुनै पनि क्...
‘मृत्युलाई हाँसेर, हँसाएर स्वीकार गर्नुपर्छ’ access_timeमाघ २१, २०७६
चुनीखेलका विनोद वाइबा बेडमा पल्टिरहेका थिए । बेडसँगै अक्सिजनको सिलिन्डर अनि सिलिङमा झुन्ड्याइएको स्लाइनको बोतल । नाकमा अक्सिजनको पाइप अनि हातबाट स्लाइन । हेर्दा सामान्य बिरामीजस्तो लागे पनि उनी चौथो चरणको क्यान्सरबाट गुज्रिरहेका छन् । यसको उपचार सम्भव छैन र आफूमाथि...
किन खानुपर्छ ‘सुपर फुड’ को दर्जा पाएको ब्रोकाउली ? access_timeपुस १९, २०७६
प्रायःजसो जाडो मौसममा सहज र सुलभ रुपमा बजारमा उपलब्ध हुने तरकारीहरुमध्येको एक हो ब्रोकाउली । तिख्खर स्वाद र एक किसिमको गन्धका कारण धेरैजसोका लागि यो रुचिकर तरकारी बन्दैन । खासगरी, केटाकेटीहरुले त यो तरकारी खान खासै मन गर्दै गर्दैनन् । तर ब्रोकाउली तरकारीहरुमध्येमा ...
श्वास गन्हाउने समस्या भएकालाई क्यान्सरको खतरा, यस्तो छ बच्ने उपाय access_timeपुस ५, २०७६
मुख हाम्रो महत्वपूर्ण अङ्ग हो । हाम्रो शरीरलाई आवश्यक खाना हामीले मुखबाट नै खाने गर्छौं । त्यसैले पनि मुख स्वास्थ्य महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा मानिन्छ । तर श्वास गन्हाउने समस्याले कतिपय मानिस विभिन्न सभासमारोहमा जान पनि हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था गर्छन् । मुख तथा श्वास गन्हाउँदा अ...
जापानका पूर्वमहारानीलाई स्तन क्यान्सर, शल्यक्रिया गर्ने तयारी access_timeभदौ २२, २०७६
टोकियो– जापानका पूर्व महारानी मिचिकोलाई स्तन क्यान्सर भएकाले शल्यक्रिया गरिने भएको छ । आइतबार ८४ वर्षीया महारानीलाई प्रारम्भिक चरणमा रहेको क्यान्सरको शल्यक्रिया गर्न लागिएको उनको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । मिचिकोका पति अकिहितोले गत अप्रिलमा औपचारिक रु...